Arsenal oo guul muhiim ah kaga gaartay Emirates Stadium kooxda Everton, xili Lacazette iyo Aubameyang ay shabaqa wada gaareen – Gool FM
(Premier League) 23 Sab 2018. Arsenal ayaa guul raaxo leh ee muhiim ah kaga gaartay Emirates Stadium kooxda Everton, kadib markii ay ku garaacday 2-0.
Kooxda Everton oo marti ku ahayd garoonka Emirates Stadium ayaa iska caabin xoogan kala hor tagtay kooxda Arsenal kulankooda 6-aad ay ku wada ciyaareen horyaalka Premier League.
Qeybta hore ee ciyaarta ayay labada kooxood Arsenal iyo Everton ku kala nasteen barbaro 0-0, waloow labada dhinacba ay sameeyeen weeraro halis ah.
Marka dib leysugu soo laabtay ciyaarta kooxda Arsenal oo ku ciyaareesay Emirates Stadium ayaa lasoo gashay garoonka qaab ciyaareed ka duwan qeybtoo hore waxayna bilaaween weerar isdaba joog ah.
Daqiiqadii 56-aad ee qeybtii labaad ciyaarta Alexandre Lacazette ayaa dhaaliyay goolka daah furka, wuxuuna ciyaarta ka dhigay 1-0, kaidb markii uu caawin ka helay Aaron Ramsey ayuu si qurux badan u dhax dhigay shabaqa Everton.
Markale Arsenal ayaa la tamid goolkeeda labaad ee ciyaarta, waxaana daqiiqadii 59-aad ee ciyaarta 2-0 ka dhigay Pierre-Emerick Aubameyang waxaana markale goolkan caawiyay Aaron Ramsey.
Qeybta dambe ee ciyaarta ayaa u muuqatay inay ahayd hal dhinac oo kaliya kadib markii ay Arsenal ahayd kooxda inta badan ciyaarta sida ay doonto ka yeeleesay, iyagoo sameeyay fursado kale ee badan.
Ugu dambeyn ciyaarta ayaa kusoo idlaatay 90-ka daqiiqo 2-0 ay guusha ku raacday kooxda ku ciyaareesay garoonkeeda Emirates Stadium, waxayna Gunners guushan ay gaartay booska 6-aad kala baxday dhigeeda Man United.